Nadaamka iskuulkaActuellement sélectionné
​​Halkan waxad ka ogaan kartaa wax badan oo ku saabsan guriga wakhtiga firaaqada, xannaanada, iskuulka aasaasiga ah iyo dugsiga sare. Yacnii nadaamka iskuulka ee Iswiidhan.
Halkan waxad ka ogaan kartaa wax badan oo ku saabsan guriga wakhtiga firaaqada, xannaanada, iskuulka aasaasiga ah iyo dugsiga sare. Yacnii nadaamka iskuulka ee Iswiidhan.
Förskola (xannaano) - xannaanadu waa hawl kooxeed carruurta loogu talogalay laga bilaabo 1 sano ilaa iskuulku ka bilaabmayo. Carruurtu waxay xannaanada ku bilaabaan da´o kala duwan, waxanay ka qaybqaataan wakhtiyo dhererkoodu kala duwanyahay. Hawsha xannaanadu waxa tusaale ahaan suurtagal uga dhigaysaa waalidka inay is waafajiyaan waalidnimadii iyo shaqada ama waxbarashada.
Förskoleklass (Fasalka iskuulka ka horreeya) - fasalka iskuulka ka horreeya waa qaab iskuul oo ikhtiyaari ah. Carruurta oo dhan waxa loo soo bandhigaa kursi ka mid ah fasalka iskuulka ka horreeya laga soo bilaabo dayrta uu ilmuhu buuxinayo 6 jir ilaa uu ka bilaabayo iskuulka aasaasiga ah.
Skolbarnomsorg (Xannaanada carruurta iskuulka) - Degmooyinka waxa waajib ku ah inay siiyaan carruurta iskuulka dhigata ilaa 12 jirkooda guriga wakhtiga firaaqada ama xannaano tarbiyadeed , haddii ay waalidkood shaqeeyaan ama wax bartaan.
Grundskoleutbildning (waxbarashada iskuulka aasaasiga ah) - Iswiidhan waa in ay iskuul dhigtaan dhammaan carruurta u dhaxaysa 7 iyo 16 jir. Bilaabidda iskuulku waa wax la bedbedeli karo, sidaa darteed ilmuhu wuxu ku bilaabi jiraa 6 jir, 7 jir ama 8 jir haddii ay jirto sabab gaar ah.
Gymnasieutbildning (Dugsiga sare) - dhammaan dhalinyarada dhammaysa iskuulka aasaasiga ah, waxay xaq u leeyihiin waxbarasho dugsi sare oo saddex sano ah. Waxbarashada dugsiga sare waxay siinaysaa qofka aqoon aasaasi ah oo uu wax ku sii baran karo iyo xirfaddii mustaqbalka uu ku shaqaysan lahaa.
Särskolan (Iskuulka goonidaa) - Carruurta heysata caqabad koritaan markasta kama bixi-karaan iskuulka aasaasiga ee caadiga ah.
Dugsiga sare ee gaarka ah wuxuu soconayaa muddo afarsano ah. Waxaa jira barnaamij qaran iyo barnaamij shakhsi ah oo lakala dooran karo. Inta uusan arday bilaabin dugsiga sare ee gaarka ah waxey sameyneysaa degmada qiimeyn dhanka waxbarashada, dareenka iyo caafimaadka ah si loo ogaado in ay tahay middaan qaab iskuul oo ku habboon ardayga.
Warbixin oo waxbarashooyinka ku saabsan
Wakiilka carruurta iyo ardayda (BEO)
Khariidad la gujin karo
​Warbixin dheeri ah oo ku saabsan nidaamka waxbarshada
Waxaad ka akhrisan kartaa warbixin dheeri ah oo ku saabsan nidaamka waxbarashada
Xaddaanad iyo fasalka xaddaanadda
Iskuulka aasaasiga iyo iyo guriga xaddaanada ka dib